Toradora Season2- के यो हुन्छ? - पालना दृश्य
Toradora सीजन 2
Toradora Season2- के यो हुन्छ?
by Dima 21st डिसेम्बर 2020 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड टोराडोरा सीजन २ मा - यो हुन्छ?
टोराडोरा एक धेरै लोकप्रिय एनिमे थियो जुन मूल रूपमा अक्टोबर २, २००2- मार्च २, २०० between बीचमा चल्थ्यो। प्रशंसकहरूले यसलाई मन पराउने र रमाईलो पात्रहरूका लागि मन पराउँथे। टोराडोराको अन्त्य केही निर्णायक थियो। टायगा स्वीकार्छिन् कि उनी कितामुरालाई माया गर्दिनिन र टाकासुलाई चुम्बन गर्छिन्। टोराडोराको लागि खेल जारी भएपछि फ्यानहरूले आशा गरे कि तिनीहरूले अर्को सीजन र पहिलेका सबै पात्रहरूको फिर्ती देख्नेछन्। यो लेखमा हामी छलफल गर्दैछौं कि त्यो सम्भव छ भने।
अवलोकन - टोराडोरा सीजन २
अन्त्यको केहि केहि अपूर्ण थियो जसमा हामीले अघि भनेजस्तै थियो र टोराडोराबाट पुरानो क्यारेक्टरहरू प्रस्तुत गर्ने नयाँ एनीम पनि हामी के जाँदैछौं भन्ने हो। हामी के हुँदै जानेछौं तपाईंले सीजन २ को लागि अपेक्षा गर्न सक्नु हुन्छ यदि यो हुन्छ भने। जब टाईगाले टाकासूलाई चुम्बन गर्दछ तिनीहरू वास्तवमा अन्तमा सँगै हुँदैनन्। ताकासुले ताइगालाई जान दिनुहोस् ताकि उनी खुसी हुन सकून् र टाकासु अनुमानको रूपमा अगाडि बढ्दछ। त्यसकारण यो एक मौसम2सारांश सारांश गर्न सजिलो छ र यो कस्तो देखिन्छ, हामी यस लेखमा पछि छलफल गर्नेछौं।
मुख्य पात्रहरू - Toradora सीजन 2
टोराडोरामा मुख्य पात्रहरू रोचक र अद्वितीय थिए, तिनीहरू पनि लाइक थिए। ती सबैको फरक गतिशीलता र समस्याहरू थियो जसले उनीहरूलाई निश्चित तरिकाले फरक परिस्थितिहरू सबै बिभिन्न रूपमा र आफ्नो अनुकूलनीय तरीकामा बनाउँदछ। मलाई तिनीहरू सबै साँच्चिकै मनपर्‍यो र उनीहरूले मुख्य भूमिकाका साथै आफ्नो काम पनि गरे। उनीहरू सबैसँग राम्रो चापहरू थिए र उनीहरू सबैले मलाई सन्तुष्ट गरे।
पहिले हामीसँग ओहाशी हाई स्कूलको छात्र र्याजी ताकासु छ, जहाँ ताइगा पनि पढ्छे। टाकासुको डरलाग्दो उपस्थिति छ र उसले मूल रूपमा आफ्नो बुबालाई प्रकट गर्दछ जुन एक ज्ञात अपराधी थियो।
यसै कारण सबैले उसलाई बेवास्ता गर्छन्। उसको डरलाग्दो दृश्य छ तर दयालु छ र धेरै मालिसियस मनसाय छैन। टाकासुको बुबाको मृत्यु भयो जब उहाँ जवान हुनुहुन्थ्यो र उहाँकी आमाले त्यसबेलादेखि हुर्काउनुभयो।
अब हामीसँग टाईगा आइसाका छ जो ओहाशी हाई स्कूलको विद्यार्थी पनि हो। उनीलाई "पाम शीर्ष ताइगा" भनेर चिनिन्छ, एक सन्दर्भ जुन उनी बाँच्छिन्। यो उनको उग्र प्रकृति र तथ्य छ कि सानो छ को कारणले हो।
उनको नराम्रो स्वभाव उनको उपस्थिति संग धेरै राम्रोसँग विरोधाभास गर्छ र यही कारणले धेरै व्यक्तिले उनलाई गम्भीरताका साथ लिदैनन्। ती व्यक्तिहरू मध्ये एक उनको बुबा हुन् जसले उसलाई छोडेर जानुहुन्छ जब उहाँ केवल आफ्नो जीवनमा पछाडि हिंड्न थाल्नुहुन्छ र फेरि छोड्नुहुन्छ।
उनको चरित्रको उनको बुबाको बारेमा एक ठूलो चाप छ र यो निश्चित रूपमा श्रृंखलामा अन्वेषण गरिएको छ।
उप क्यारेक्टरहरू - टोराडोरा सीजन २
टोराडोरामा उप पात्रहरू अलिकता उथला थिए र ती मध्ये एक पूर्ण रूपमा नक्कली थियो। यो पाठ्यक्रम जानबूझेर गरिएको थियो र यसले समग्रमा उसको चरित्रको पक्षलाई अगाडि बढाउँदछ। धेरै जसो यी पात्रहरू मित्र हुन् वा हाम्रो मुख्य पात्रहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन् र यिनीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्। टाईगा र टाकासु जस्ता यस श्रृंखलाका केही मुख्य पात्रहरूको चाप अगाडि बढाउन तिनीहरू महत्त्वपूर्ण छन्।
तपाईं Kawashima माया गर्नुहुन्छ
टोराडोरामा उप पात्रहरू!
टोराडोराको अन्त्य - टोराडोरा सीजन २
टोराडोराको अन्त्य धेरै पूर्वानुमान योग्य थिएन र यसले मलाई पहरामा पहिलो चोटि समात्यो। हामी वास्तवमै टाईगा र ताकासु एकसाथ भेला भएको र एक जोडी भएको हेर्न पाएनौं। म यसलाई जोड्न चाहान्छु विगत २०+ एपिसोडहरूमा निर्माण गरिएको सबै तनाव पछि। मैले तिनीहरूलाई सँगै भेट्न मन पराउँथें तर म अनुमान लगाउँछु कि लेखकले त्यस्तो सोचेनन्। जे भए पनि थाईगा र टाकासु सँगै टु don't्ग हुँदैन र जहाँ कहानी अन्त हुन्छ।
टोराडोराको अन्त्य अन्त्य मौसमको निर्णयमा महत्वपूर्ण छ वा त्यहाँ टोराडोरा सीजन २ हुनेछैन। यो सिन्डि2२ को मौसम कस्तो देखिन्छ भनेर संक्षेपमा हामी यो अन्डिंग प्रयोग गर्न सक्दछौं। उदाहरण को लागी हामी नयाँ सिजनले टाईगा र ताकासु दुबै पुनर्मिलन भएको देख्नेछौं र उनीहरूको पछिल्लो हाईस्कूलको चिन्ताबाट टाढा नयाँ सम्बन्ध सुरु गर्नेछौं। यसले अन्तत: पछिल्लो सिजनमा उत्पन्न कुनै पनि समस्यालाई अन्त्य गर्दछ।
एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् कि anime अन्ती मa्गा अन्त्य भन्दा फरक छ। Heres कसरी यो फरक छ:
"प्रकाश उपन्यास एनिमे भन्दा केही फरक समाप्त भयो। मुख्य प्रकाश उपन्यास रियुजीमा समाप्त हुन्छ जुन उसले आफ्नो उच्च माध्यमिक स्कूलको तेस्रो वर्षको आरम्भ गर्छ र टाईगालाई स्कूलको साथ भेटघाट गर्दा, एनिमेज तिनीहरूको हाईस्कूलको स्नातकमा समाप्त हुन्छ, र त्यसपछि कक्षाकोठामा टाईगालाई भेट्छ। प्रकाश उपन्यासमा, उहाँ अर्कै ठाउँमा सर्नुभयो तर नजिकैको अपार्टमेन्ट ब्लक र उनकी आमाले उनलाई स्कूलबाट ड्रप आउट आवेदन रद्द गर्नुभयो। मa्गा अझै समाप्त भएको छैन, त्यसैले हामी प्रत्येक-सेई यसको अन्त्य थाहा छैन। म प्लटको हिसाबले यो सब भन्दा टाढा भन्न सक्दिन, किनकि यसले वास्तवमा उनीहरूको तेस्रो-वर्षको उच्च स्कूल जीवन वा पछाडि कभर गर्दैन।
जे होस्, त्यहाँ टोराडोरा भिज्युअल उपन्यास छ कि उनीहरूको हाई स्कूल स्नातक पछि के हुन्छ कभर गर्दछ। टाइगा एन्डिले उनलाई रुयूजी र गर्भवतीको साथ रहेको बतायो।
स्रोत: एनिम स्ट्याक एक्सचेन्ज
अर्को मौसम हुनेछ? - Toradora सीजन 2
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ अन्त मांगा मा फरक छ। तर यो एक मौसम को रूप मा के मतलब हो? यसको मतलव त्यहाँ केहि छ जुन अनुकूलन गर्न सकिन्छ। एनिमेसको अर्को अन्त्य हुन सक्छ जुन दुबै टाईगा र ताकासुलाई फेरि एकसाथ देख्ने थियो। यो अन्त्य १२ एपिसोड OVA को रूपमा गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ कि यो टोराडोराको लागि सम्भावित नतिजा हो यदि यसले अर्को सीजन लिइरहेको थियो। यद्यपि नेटफ्लिक्स र फनिमेसनको हाल टोराडोरामा स्ट्रिमि rights अधिकार रहेको छ।
नेटफ्लिक्सले टोराडोराको दोस्रो सीजन कोष गर्न सक्दछ र यदि सामग्री छ भने। दोस्रो सीजन प्राय: यसमा निर्भर रहन्छ र यस्तो नभएसम्म अर्को मौसम बनाउन सकिने सम्भावना हुँदैन। यो भनिएको छ कि यो एक प्रोडक्शन कम्पनी वा नेटफ्लिक्स को लागी आफैले लेख्न असम्भव छैन, केवल धेरै असम्भव छ।
नयाँ मौसम कहिले हावा हुन्छ? - Toradora सीजन 2
हामीले छलफल गरेका सबै कुरा दिएमा हामी भन्छौ कि टोराडोरा सीजन २ असम्भव छ। जहाँसम्म, यदि हामीले भनिएको कहानीमा आधारित नयाँ सिजन सिर्जना गरिएको थियो भने हामी यो भन्छौं कि नयाँ सिजन अक्टूबर २०२२ को आसपासमा प्रसारित हुनेछ सायद २ तारिखमा पनि। यो पहिलेको सिजन प्रसारित भएको बेलादेखि नै यसले अझ राम्रो बनाउँदछ।
आशा छ कि हामी एक टोराडोरा सीजन2देख्दछौं, तर अहिलेका लागि हामी केवल भन्न सक्छौं। नयाँ सिजन, यदि यो सृजना भयो भने सम्भवतः टाकासु र थाइगा दुवै हुने गर्दछ र उनीहरूको जीवन वयस्कको रूपमा केन्द्रित हुनेछ। यो anime मा के छोडियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने उत्तम तरिका हुनेछ। यो Scums ईश गर्न केहि अलि समान पक्ष हुन सक्छ (यहाँ हाम्रो मौसम2लेख पढ्नुहोस्) कि दुबै चरित्र जसले एक अर्कासँग नहुने निर्णय गरे अन्तमा अन्तमा सँगै समाप्त हुन्छन्।
टोराडोरा एक एनिमे हो जुन हामी सबै फेरि हेर्न चाहन्छौं। यद्यपि माथिका परिस्थितिहरूलाई हेरेमा टोराडोरा अर्को मौसममा फर्किने सम्भावना छैन। यद्यपि मa्गा अन्त्य वैकल्पिक थियो र अर्को सामग्रीको लागि अनुकूलित हुन केहि सामग्री छ यो हामी एक टोराडोरा सीजन २ देख्ने सम्भावना छैन।
यदि तपाईंलाई यो पढ्न रमाईलो लाग्दछ र यसले तपाईंलाई मद्दत गर्‍यो भने कृपया हाम्रो अन्य पोष्टहरू पढ्न विचार गर्नुहोस् र यसमा मनपर्‍यो वा टिप्पणी गर्नुभयो, यसको अर्थ धेरै हुन्छ। तल हाम्रा अन्य लेखहरू छन् जुन तपाईं भर्खरै पढ्नु भएको जस्तो मिल्दोजुल्दो छ।
टैग: 2ndseasontoradora animetoradora animetoradorasaeson2releasedate animetoradoraseason2 सिजनटोराडोरा दोस्रो सिजन टोराडोरा toradora टोराडोरा २ toradora2ndseason toradoraanime toradoraanimenewseasoninfo toradoraanimeseason2 toradoanewseason toradoanewseasonarticle toradoraseason2? toradoraseason2proof टोराडोरसेकेन्डसिजन willtoradoragetanorseeason willtoradoragetaseson2
अघिल्लो प्रविष्टि के कागुया सामथ्य हेरिरहेको छ?
अर्को प्रविष्टि नेटफ्लिक्समा हेर्न शीर्ष १० स्लाइस लाइफ एनिमे